NextMapping | Tababbarka Ganacsiga ee Ganacsatada
NextMapping™ loogu talagalay ganacsatada
Waxaan ku suganahay dhaqaalaha gig.
Solopreneurs iyo ganacsatada waa mustaqbalka shaqada. Cilmi baaris ayaa muujisay in sanadka madax-bannaanida 2025 iyo shaqaalaha qandaraasku ay qayb wanaagsan ka noqon doonaan shaqaalaha. Upwork waxay ogaatay in 47% dadka da'da ah ee '18-21' ay si xor ah u xukumaan sanadkii la soo dhaafay. Xogtu waxay muujineysaa in jiil kasta oo cusub dad badani ay dooranayaan inay noqdaan madax u gaar ah isla markaana ay xawaareyn doonaan horumarka iyo guusha ay ku gaarayaan tababbarka mihnadeed ee saxda ah.
Haddii aad hore u tahay ganacsade guuleysta ama raadinaya inaad iskaa u yeelato Cheryl Cran oo kooxdeeda ah waxay siisaa tabobaraha tababbaraha ganacsiga inay kugu caawiyaan inaad guuleysato.
Haddii wax muhiim ah ku filan yihiin, xitaa haddii qasaarooyinku kaa soo horjeedaan, waa inaad wali sameysaa. ”
Waxaan u qabannaa munaasabado nool oo sanadle ah ganacsatada halkaas oo aan ku ogaanayno meelaha ugu muhiimsan si aan mustaqbalka u caddeynno ganacsigaaga. Tan waxaa ka mid ah tikniyoolajiyadda iyo meheradaha ganacsiga si loo fududeeyo loona fududeeyo koritaanka ganacsiga. Khubarada martida waxaa ka mid ah CIO, saynisyahano dabeecadeed, saynisyahano xog, cilmi-nafsi ee khubarada guusha iyo inbadan.
NextMap meheraddaada si koritaan xadidan ah
Qofkasta oo weyneeyay wuxuu ku sameeyay caawimaad. Ganacsatada waaweyn sida Richard Branson, Sara Blakely, Elon Musk, iyo Lori Greiner dhammaantood waxay leeyihiin tababaro hogaamineed iyo / ama tababare ganacsi si ay u bixiyaan aragtiyo, aragtiyo iyo duruufaha jira. Tababbarkayaga NextMapping ™ ee ah tababbarayaasha ganacsatada ah ayaa loo habeeyay baahiyahaaga gaarka ah. Iyada oo loo adeegsanayo xogururinta iyo qiimeynta waxaan u sameyn karnaa caado 'Nextmap' adiga iyo ganacsigaaga. Waxaan bixinaa bilaha 6 ama 12 bilood xirmo ganacsi oo xirmo ah.
Sannadlaha NextMapping ™ ee munaasabadaha ganacsatada
Sanadkiiba hal mar ayaanu la kulannaa ganacsatada isla fikirka leh oo ku sugan goob dib loogu noqdo si aan diirada u saarno khariidaynta waxa kugu xiga ee ganacsade ah iyo waxa ku xiga ganacsigaaga. Munaasabadan kobcinta ganacsiyada ee 2-maalin waxaad ka maqli doontaa mustaqbalka, istaraatiijiyadda, saaxibada teknolojiyada, hogaamiyaasha fikradaha abuurista iyo tababbarayaasha ganacsiga khabiirada. Waxa aad uga tagi doontaa goos gooskan adoo wata 'khariidad' wax qabad, qorshayaal iyo yoolal waaweyn oo kaa caawinaya inaad wax ka sii fiicnaato intii aad saadaalin lahayd mustaqbalkaaga geeska ah…. Waad khariidayn doontaa.
12 bisha barnaamijka latalinta kobcinta aan caadiga ahayn
Ku soo biir aasaasahayaga, Cheryl Cran iyada oo loo marayo durdur toos ah hal mar bishii bilaha 12 iyo helitaanka waxyaabaha ku saabsan barnaamijyada fiidiyowga, tabobar ganacsi xirfad leh, tusaalooyin, aalado iyo ilo bilaash ah. Waxaad ka heli doontaa qaabab cusub oo aad ugu kobcin karto meheraddaada adigoo ku xiraya aragti cusub oo cad oo geesinimo leh oo ujeeddo xamaasad leh. Waxaad la xiriiri doontaa ganacsatada kale ee sida oo kale ah oo aad la wadaagi doontid sirta guusha iyo casharada ay barteen.
Nala soo xiriir si aad noo saxiixdo